मानिसमा कसरी विकास भयो हाँस्ने कला ? के अरु जनावर पनि हाँस्दछन् ?Main Samachar
४ पुष २०७७, शनिबार १५:०१ प्रकाशित
आफ्नो मनपर्ने घरपालुवा जनावरसँग हामी एक अलग्गै खालको भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्दछौँ । घरमा पालेको कुकुर सँग कुराकानी गर्दछौँ, सुगासँग भलाकुसारी गर्छौँ अनि मनका कुरा खोल्छौँ पनि ।
आखिर जनावरसँग कुराकानी गर्नु तथा मनका कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ । तर पनि किन हो कुन्नि आफ्नो प्यारो साथी जनावरहरुले मेरो भावना बुझ्दछ भन्ने विश्वास हामीलाई हुन्छ । तर वास्तविक रुपमा जनावरहरुले के र कति बुझ्न सक्दछन् त ?
उदाहरणका लागि हामीलाई यति त थाहै छ कि जनावरहरुले आनन्दको महसुस गर्न सक्दछन् । तर के जनावरले हाँसोठट्टा पनि बुझ्न सक्दछ त ? के जनावरले चुट्किला भनेको पनि बुझ्दछ त अनि रमाइलो कुरा सुनेर वा दृश्य देखेर खित्का छाडेर हाँस्न सक्दछ त ?
के कुकुर, बिरालो वा अन्य जनावर पनि मानिस हाँसेजस्तै गरी हाँस्न सक्छन् ? आखिर मानिसमा हाँस्ने कला के कारणले गर्दा विकसित भयो ? यो एक रहस्यको रुपमा रहेको छ । पृथ्वीमा रहेका हरेक मानिस, चाहे जुनसुकै भाषा किन नबोलुन् सबै हाँस्न जानेका छन् र हाँस्ने शैली पनि प्रायः एकै खालको हुन्छ । हामी अवचेत नै पनि हाँस्छौँ । हाम्रो भित्री मनबाटै हाँसोको सिर्जना हुन्छ । र, यसका लागि कुनै विशेष खालको प्रयासको आवश्यकता पर्दैन ।
वास्तवमा हाँसो एउटा संक्रामक चिज हो । जसरी संक्रामक रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ, त्यसैगरी एकजना मानिस हाँस्दाखेरी अर्को मानिस पनि मुस्कुराउन थाल्दछ । यो एक सामाजिक चरित्र हो ।
मान्छे जन्मेपछि बोल्न सिक्नुअघि नै हाँस्न सिकेको हुन्छ । वास्तवमा हाँसोले दुई वा दुईभन्दा धेरै मानिसहरुको बीच सम्बन्धको आधार तयार हुन्छ ।
हाँसो सम्बन्धी एक सिद्धान्त अनुसार मानिसमा हाँसोको सुरुवात अचानक भैरहेको कुनै घटनाका बारेमा चेतावनी दिनका लागि भएको थियो, जस्तै अकस्मात बाघ आएको । भलै हामीलाई आफू किन हाँस्छौँ भन्ने कुरा थाहा छैन, तर पनि हाँसिरहेकै हुन्छौँ । तर के जनावर पनि हाँस्दछन् त ? यदि हाँस्दैनन् भने कि ?
जनावरहरु मध्ये मानव प्रजातिसँग नजिकको सम्बन्ध भएका प्रजातिहरु चिम्पान्जी, गोरिल्ला, बोनोबो तथा ओरांगउटान हुन् । यी जनावरहरु पनि दौडने(समाउने खेलमा खुसे हुँदा वा काउकुती लगाउँदा हास्ने गर्दछन् । उनीहरुले हाँसोजस्तै आवाज निकालेर आफ्नो खुसी व्यक्त गर्दछन् । रोचक त के भने चिम्पान्जी जस्तै मानिससँग नजिकको सम्बन्ध रहेका बाँदर प्रजातिहरुको आवाज चाहीँ मानिसको हाँसो हस्तै हुन्छ ।
ओरांगउटानले काउकुति वा कुनै उत्तेजनाका बखत मानिस हाँसेजस्तै निकै प्रफुल्लित आवाज निकाल्दछ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि हामी बोल्नुभन्दा अघि नै हास्ने क्षमताको विकास भएको हो ।
सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्ने पोथी गोरिल्ला कोकोले एकपटक आफूलाई चिडियाखानामा स्याहारसुसार गर्ने मान्छेको जुत्ताको फित्ता एक आपसमा बाँधिदिएको थियो र अब मलाई पक्रेर देखाउ त ? भन्ने भावमा जिस्काएको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने गोरिल्लासँग ठट्टा मजाक गर्ने क्षमता पनि हुन्छ ।
आवाज नक्कल गर्नसक्ने मैना तथा सुगाजस्ता चराहरुले मानिसको हाँसोको समेत नक्कल गर्ने गरेको पाइन्छ । सुगाहरुले अन्य जनावरलाई चिढाउनका लागि समेत अनेक खालका आवाज निकाल्ने गर्दछन् । घरमा पालिएको सुगाले घरकै कुकुरलाई दिक्क पार्नका लागि सिठी बजाउने जस्ता आवाज निकाल्ने गरेको समेत सुनिन्छ, जुन उसले केवल आफ्नो मनोरञ्जनका लागि गर्दछ ।
त्यस्तै काग तथा सोही परिवारका अनय चराहरुले भोजन पत्ता लगाउनका लागि विभिन्न खालका तरिकाहरु ऋपनाउने गरेको पाइन्छ । यहाँसम्म कि कागले सिकारी मांशाहारी जनावरको पुच्छरसमेत तानिदिने गर्दछ ।
सिकारी जनावरको ध्यान भड्काएर उक्त सिकार चोर्नका लागि कागले त्यसो गर्ने गर्दछ । तर कहिलेकाहीँ कागले खानेकुरा नभएको अवस्थामा समेत अन्य जनावरको पुच्छर तानिदिने गरेको देखिन्छ । यसो गर्नुको कारणचाहिँ केवल मनोरञ्जनका लागि मात्रै हो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ कि कतिपय पंक्षीहरुमा समेत सेन्स अफ ह्यूमर हुन्छ । अर्थात् चराहरु समेत हाँस्दछन् भलै मान्छेले त्यो देख्न सक्दैन ।
मस्तीमा रहँदा हात्तीले समेत आवाज निकाल्दछ । तर ती जनावरका व्यवहार मानिसको हाँसोजस्तै हो कि विशेष परिस्थितिमा अन्य जनावरहरुकै जस्तो आवाज निकालेका हुन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन भने असम्भव नै हुन्छ ।
घरका पाल्तु जनावरहरु के मानिससँग हाँस्न सक्दछन् ? वैज्ञानिकहरुका अनुसार कुकुरमा एक प्रकारको हाँसोको क्षमता विकसित भएको छ । आफैमा खुसी तथा मस्त रहेको बेला कुकुरले जिब्रो बाहिर निकालेर जोड जोडसँग स्वाँ स्वाँ गर्दछ र विशेष खालको आवाज निकाल्दछ । यो आवाज कुकुरले सामान्य गर्मीको अवस्थामा जिब्रो निकालेर स्वाँ स्वाँ गर्नेभन्दा फरक हुन्छ ।
त्यस्तै बिरालोले पनि खुसी भएको बेला विभिन्न खाले गतिविधि गर्दछ र ठट्टायुक्त व्यवहार देखाउँदै मानिसको ध्यान तान्ने प्रयास गर्दछ । एजेन्सी